Fokontany Ankorondrano Andranomahery : ankizy 350 tsy tafiditra an-tsekoly | NewsMada
Fokontany Ankorondrano Andranomahery : ankizy 350 tsy tafiditra an-tsekoly
12 000 ny mponina ao amin’ny fokontany Ankorondrano Andranomahery ary 40% amin’ireo tena sahirana avokoa, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny fokontany, Ramanantany Alain, ny asabotsy teo. Mivelona amin’ny asa madinika ny ankamaroan’ny vahoaka. Ho fanampiana azy ireo amin’izao fiandohan’ny taona vaovao izao, nanolotra sakafo ho an’ny olona 1 000 mahantra ao anatin’ny faritra valon’ny fokontany ny tanora ao amin’ny fiadidiana ny Repoblika ny faran’ny herinandro teo. Vary, 3t 500 kg, tsaramaso 22 gony, biskoy 30 baoritra, siramamy 15 gony ary pâte 30 baoritra no nozaraina azy ireo teny Ankorondrano. Tsy hijanona fotsiny eto Antananarivo, hitohy any amin’ny faritra hafa ny hetsika ataon’ny tanora mpikambana rehetra. « Misy ny mpiasa ao anatin’ny fiadidiana ny Repoblika, manampy ireo ny tanora avy aty ivelany tsara sitrapo ihany koa », hoy ny mpitarika, Rahonitrarivo Rija.
Ao anatin’ny fotoam-pahavaratra izao, vokatry ny asa tanamaro nanadiovana ny lakandrano nataon’ny komitim-pokontany 52 sy ny mpikambana amin’ny CLS mahatratra 13. Tsy nisy traboina na dia nirotsaka betsaka aza ny orana farany teo, hoy ny sefo fokontany ihany.
Fitarainana ataon’ireo vahoaka ny hanitarana ny EPP Ankorondrano satria fokontany telo no mampiana-janaka ao ka tsy maharaka ny efitrano fianarana. Amin’izao fotoana izao, mpianatra 300 tsy tafiditra ao amin’ny EPP no manaraka fampianarana ao amin’ny fiangonana Filadelfia. Ankoatra izay, mbola misy ankizy 350 hafa miandry toerana fotsiny.